Duqeymo culus oo Al-Shabaab loogu geystay duleedka degmada Jilib – Hornafrik Media Network
Taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa faah-faahin dheeri ah ka bixiyey duqeyn dhinaca cirka ah oo diyaaradahooda ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah gobolka Jubbada Dhexe ee ku yaalla koonfurta Soomaaliya.
Duqeynta oo aheyd mid xoogan ayaa taliska AFRICOM, wuxuu sheegay inay la beegsadeen xubno ka tirsanaa Al-Shabaab oo ku sugnaa agagaarka degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe.
War-saxaafadeed ka soo baxay AFRICOM ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeyntaasi oo ay gacan ka geysteen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dowladda Soomaaliya lagu burburiyey saldhig ay Al-Shabaab ku lahaayeen halkaasi.
Ma shaacin khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca ee ka dhashay weerarkaan, marka laga soo tago burburinta saldhiggaasi.
Sidoo kale warka ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeynta ay fuliyeen diyaaradahooda aysan wax khasaare ah ka soo gaarin dadka rayidka ah.
Ugu dambeyn dowladda Mareykanka ayaa ballan qaaday inay xoojin doonto dagaalka adag ee ay kula jirto Al-Shabaab, gaar ahaan duqeymaha ay la beegsato kooxaha ka soo hor jeeda dowladda ee ka dagaalama Soomaaliya.